'फोटोमा कहाँ छ नग्नता? लुकाउनु पर्ने अंग सबै लुकेकै छन् ' :नायिका शुभेच्छा थापा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
नायिका शुभेच्छा थापाको नाम लिन भुलेमा शायद ग्ल्यामरको दुनिया नै अपुरो हुन्छ । नेपाली चलचित्र नगरीमा एकदमै ग्ल्यामर भूमिकामा देखिएर हट एण्ड सेक्सी नायिका परिचय बनाएकी नायिका हुन् , शुभेच्छा थापा ।यसैका कारण उनी करिव दुई दशक देखी यो क्षेत्रमा राज गर्दै आएकी छिन् । धेरै सिनेमामा अभिनय नगरेतापनि उनी हरेक बर्षभरी नै चर्चामा रहन्छीन ।यसका साथै उनी कहिले अर्धनग्न तस्विरका कारण, कहिले छातीमा नेपालको झण्डा ट्याटु खोपेको कारण, कहिले आफ्ना गोप्य अंग खादाले छोपेर तस्विर खिचाएका कारण त कहिले माछाले शरिर छोपेर तस्विर खिचाएका कारण चर्चामा आइरहन्छिन् । यसरी समय अनुकुल आफूलाई अगाडी ल्याउन सफल सधै चर्चाको शिरमा रहिरहने नायिका शुभेच्छा जति विवादास्पद रुपमा देखिएपनि नेपाली रजतपटमा भने उनी एकछत्र छाइरहेकी छिन् ।पछिल्ला समय उनले अभिनय तथा निर्माण गरेका चलचित्रहरु दिलवाले,मखमली,शिवम र खुकुरी कान्छी दर्शकमाँझ आउने भएका छन् । उनै हट सेक्सी र ग्ल्यामरस नायिका शुभेच्छा थापासँग नेपालपाटीका लागि जनार्जन पौडेलले गरेको हट कुराकानी प्रस्तुत छ :
चलचित्र शिवमको इडिटिङ हुँदैछ, पोष्ट प्रोडक्सनको काममा व्यस्त छु ।
शिवम कस्तो चलचित्र हो र दर्शकले कहिले हेर्न पाउछन ?
शिवम भरपुर मनोरञ्जनात्मक,एक्सन लभस्टोरी हो ,यो भाद्र १६ मा रिलिज हुदैछ ।
तपाइलाई त दर्शकले ग्ल्यामरको भूमिकामा मन पराउछन अनि किन एक्सन तिर देखिन लाग्नुभो, दर्शकको मन जित्न सक्नुहोला ?
म दर्शकलाई जहिले पनि एउटै कुरामा मनोरञ्जन दिनुभन्दा फरक कुराबाट मनोरञ्जन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । यसका साथै म कलाकार हुँ मैंले हरेक रोलमा फिट हुनुपर्छ । धेरै दर्शकले मलाई ग्ल्यामर र एक्सन दुबैमा सुहाउने प्रतिक्रिया पनि दिनु भएको छ । शिवममा मेरा दर्शकले दुवैथोक पाउनुहुनेछ ।
तपाइँलाई आफ्नै लगानीमा मात्र हिरोइन बन्ने भनेर आरोप छ नि ?
आफ्नो लगानीमा आफैं नायिका हुने म मात्र पहिलो नायिका हो र ? यो सव सरासर गलत आरोप हो ।
बेलाबेलामा अश्लिल फोटोलाई लिएर विवादमा आइरहनुहुन्छ नि आखिर किन गर्नु हुन्छ यस्तो ?
मैले खिचाएको फोटोलाई अश्लिल भन्न मिल्दैन । के देशको मायाले ओतप्रोत भएर छातीमा देशको झन्डाको ट्याटु बनाउृनु अश्लिलता हो ? मलाई त मैंले फोटोसुट गराएका तस्विर कुनै पनि अश्लिल लाग्दैनन चाहे त्यो माछाले शरिर ढाकेको होस वा खादाले । वास्तवमा फोटोमा कहाँ छ अश्लिलता कहाँ छ नग्नता ? लुकाउनु पर्ने अंग सबै लुकेकै छन्। देखिएकै के छ र ? मैंले खिचाएका ती तस्बिरलाई नग्नताभन्दा पनि ग्ल्यामरस भन्नुपर्छ।
तपाइँले झोकै झोकमा माछाले छाती छोपेर पनि तस्बिर खिचाउनु भयो है ?
त्यसो होइन मेरो चलचित्रको प्रमोशनको क्रममा हल्का मानिसहरूको ध्यान मप्रति आकर्षित गर्न मात्र खोजेको हुँ ।
तपाईको विचारमा सेक्स मीठो कि चुम्बन ?
अवका दिनमा कस्ता चलचित्रमा बढी आउने सोच बनाउनु भएको छ ?
सम्पूर्ण कथा मेरै लागि बनेको सिनेमामा काम गर्न मन लागिरहेको छ । जहा मैले भरपुर अभिनय गर्न पाउँ चलचित्रको कथा जस्तो सुकै होस अभिनयबाट न्याय गर्न सकुँ । जस्तै पहिला पहिलाका सम्पूर्ण चलचित्र नारी प्रधान हुन्थे । कलाकारले अभिनय देखाउन त्यस्ता खालका चलचित्र बन्नु पर्छ भन्दै नारी प्रधान चलचित्रमा अभिनय गर्ने मेरो धेय रहेको छ ।
खुकुरी कान्छीमा कान्छी बन्दै हुदैछ,कहाँ कहिले सुरु हुदैछ ?
वास्तवमा मलाई कान्छी बन्ने ठूलो रहर छ । सम्पूर्ण नेपालीपन भएको चलचित्र बनाउने र खेल्ने रहर थियो जुन खुकुरी कान्छीबाट पुरा हुदैछ । जेठको पहिलो हप्ताबट यसको सुटिङ हुदैछ ।
नेपाली चलचित्र उद्योग को स्थितिलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?
चलचित्र उद्योगमा अहिले पनि चलचित्रको व्यापार उत्साहजनक छैन । हो कुनै कुनै चलचित्रले लगानी उठाएका छन् । त्यही मध्येमा हाम्रो चलचित्र हल पनि पर्छन । हामी चलचित्र बनाउदा लगानी उठाउने चलचित्र बनाउछौं । कति लगानी बजारबाट उठाउन सक्छौं पहिला नै अनुमान लगाउछौं ।
नायिकाहरु राजनीतिमा जाने क्रम जारी छ ,तपाइको चाहि के सोच छ ?
नायिकाहरुमात्र हैन धेरै कलाकारहरु राजनीतिमा जानु भाको छ । म पनि कुनै दिन राजनीतिमा जान्छु तर, अहिलेलाई भने मेरो मन जित्ने पार्टी खास देखेकी छैन । मलाई पनि देशको नेता हुन मन चाहिँ अवश्य छ ।
अहिलेको अवस्थामा जति पनि चलचित्र गर्दै हुनुहुन्छ सबै राजु गिरीसग मात्र छन नि, किन अरु निर्देशकबाट अफर नआएकै हो त ?
पहिलो कुरा हाम्रो टिमवर्क हो ।हाम्रो एउटा टीम बनेको छ हामी त्यही टीममा बसेर काम गरिरहेका छौं । कहिलेकाही कथा अनुसार हिरोइन अरु पनि लिएका छौं । अरु निर्माताहरुले पनि कामका लागि आग्रह गर्छन तर खासै तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन ।
आफ्नु बारेमा चर्चा परिचर्चा हुँदा कस्तो लाग्छ ?
खुशी लाग्छ नि विशेष हामी कला क्षेत्रमा लागेको मान्छेलाई त चर्चा परिचयको आवश्यकता भइरहन्छ त्यसमा अप्ठेरो मान्नु भनेको मोइ माग्ने ढुंग्रो लुकाउने जस्तै हो । चर्चाकै लागि हामी यो क्षेत्रमा आएका हौं नत्र घरमा बसेर भात पकाएर लुगा धोएर बसे भैगोनि । माछाले छोप्दा नि मेरो चर्चै भो छातीको झन्डाले पनि मेरो चर्चै भो मैंले जे जे गरें दर्शक स्रोताले मन पराए र त चर्चा भो । यदि काम नै नगरेको भए अहिले शुभेच्छा थापा भनेर लाखौं दर्शकले कसरी चिन्थे त ?